Iindaba zesiXhosa, 15 eyoMdumba 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 15 eyoMdumba 2019
Written by Ashia Nkontsa on 15/02/2019
Xolisa Sindaphi: News Editor
Inkokheli yeDA kweli incoma imisebenzi kaZille
Inkokheli ye DA kwiphondo lentshona koloni umnumzana Bonginkosi Madikezela uthi eliphondo liye liphucuka ngokuphucuka phantsi kwesikhokelo sika nkosikazi Helen Zille. Unkosikazi Zille kulindeleke ukuba awise intetho yakhe yobume bephondo ngalentsasa. Inkulumbuso izakudandalazisa izinto eziyimpumelelo kurhulumente wephondo kuleminyaka imbalwa igqithileyo kuquka nesicwangciso sexesha elide sephondo. Lenkokheli ixhuzule imikhala iminyaka elishumi kweliphondo ntoleyo-yenza ukuba ibenguyena uhleli ixehesha elide njengenkulumbuso kweliphondo. Umnumzana Madikizela udwelise uluhlu lwezinto ezibeyinzuzo phantsi kolwulo luka nkosikazi Zille, phakathi kwazo kukuhla kweqondo lentswela-ngqesho. Uthi nangona iliqela imiceli-mngeni ejamelene nabantu bomzantsi Afrika kodwa eliphondo libhengezwe njengelona lineqondo lentswela ngqesho elingaphantsi kwepesenti ezingamashumi amabini.
kuthwa hlisan’amaxhala usanqunyanyisiwe u-Cimi-cimi wombane
Inkampani ephehla amandla ombane u Eskom ithi,mabathobe amaxhala abemi beli nanjengoko embalwa amathuba wokuba ungemka umbane namhlanje. Ngokwengxelo isigaba sesibini socimi-cimi wombane sipheliswe phambi kwentzimbi yeshumi ngobusuku bayizolo. Lenkampani ithi esisiqabu sibangelwa kukuphucuka kwendlela omatshini abasebenza ngayo kuquka nokongeka kwe diesel kunye novimva bamanzi. Kodwa noxa kunjalo kudizwa ukuba ukucima kombane kungenzeka ngequbuliso, nje ukuba kuthe kwabakho utshintsho kwindlela elisebenza ngayo eliziko.
uRamaphosa umise ngelithi uzawuqhawu-qhawula uEskom kathathu
Umongameli weli lomzantsi Afrika umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uzakubamba indibano kunye nemibutho yabasebenzi, malunga nesicwangciso sokwenza inkampani yakwa ESKOM ibengamacandelo amathathu. Esisicwangciso sifumene ukugxekwa okumandla zimanyano zabasebenzi. Ngethuba ephendula kwingxonxo mpikiswano yentetho yokuvula ipalamente izolo, umongameli uphinde wayibethelela eyokuba elinyathelo alijolisanga ukuthengisa eliziko liphehla umbane. Ukwavumile ukuba lenkqubo ukuzakuthi ga ngoku, ingabe kanti ayibaqukanga abo bachaphazelekayo kungoko ezimesele ukwenza inguqu koko. Umongameli ukwathe akukho ndlela zimfutshane kwingxaki ezambethe u Eskom, kungoko kufuneka kuthathwe amanyathelo angqingqwa ukuphelisa ucimi-cimi wombane. Ulebele ngelithi noxa inyathelo lokohlula lenkampani lingenakuza nesisombululo esikhawulezileyo kodwa kumele kwenziwe ukuze kuncede ukuzinzisa ubume bezimali kwixesha elizayo.
Land party izimisele ukwenza umehluko kuMzantsi wonke
Uthi uzimisele ukwenza umehluko kulonyulo lika zwelonke hayi kwiphondo lentshona koloni kuphela, ukracaza wombutho i Land Party. Lombutho wasungulwa ngabahlali base Hermanus, kwaye wafumana ifuthe kwintshukumo yoqhankqalazo lwenkonzo kunyaka ophelileyo. Umongameli walombutho umnumzana Gcobani Ndzongana uthi, bazimisele ukuphelisa nya ucalucalulo ngokobuhlanga kweli lomzantsi Afrika ukuze bakhulise uqoqosho lweli. Uthi bengulombutho bazimisele ukuthatha iintambo kurhulumente ophetheyo, ukuze benze elilizwe libeyinkokheli kwihlabathi kwicandelo lezoqoqosho.
i-ATA ikhuphe amalungu ombutho wayo ayobamela ePalamente
Umbutho omtsha wezopolitiko i Alliance for Transformation for All (ATA), nowenziwe yimibutho yetaxi emithandathu kweli, ubhengeze iinkokheli zawo ozakuzithumela epalamente. ngethuba ethetha kwalanga izolo, lowo ungusekela sihlalo walombutho kwiphondo lentshona koloni umnumzana Samuel Maneli uthi uyathemba ukuba amalungu alombutho azakumela okungumdla wabo epalamente. Uthi icandelo le taxi aliyifumani inkxaso kurhulumente kodwa banethemba ukuba lombutho uzakuba lilizwi labo. Ukwamemelele kumalungu emibutho yetaxi ukuba ayeke ukulwa odwa. Umnumzana Maneli uthi bazakungenela ulonyulo kwisigaba samaphondo nakuzwelonke. Ukwathe akukho-ndlela yokuba bangaluphumeleli ulonyulo kuba banawo amandla.